Mogadishu Journal » Mo Farax oo lagu qashqashaaday Jarmalka
Mo Farax oo lagu qashqashaaday Jarmalka
Mjournal :-Orodyahanka caanka ah ee Mo Farah ee dalka Ingiriiska uga qeyb gala ciyaaraha orodada ayaa sheegay in ilaalada garoon ku yaala dalka Jarmalka ay qashqashaadeen xili uu u safrayay dalka Itoobiya.
34 jirkan oo bisha dambe ka qeyb geli doono tartan ka dhici doono magaalada London ayaa bartiisa Instgram-ka soo dhigay muqaal muujinaya nin u muuqday ilaalada garoonka oo riixaya Mo Farah.
Afhayeen u hadlay Mo Farahan waxaa uu sheegay in dhacdadaasi ay shalay oo tallaado aheyd ka dhacday dalka Jarmalka, xili Mo Farah uu kusii jeeday Itoobiya, halkasi oo uu tababar ku qaadanayo.
Waxaa kale oo uu afhayeenka sheegay in dhacdadani mid ula kac ah, isla markaana si aan cadaalad aheyn loola dhaqmay Mo Farah
BBC-da ayaa isku dayda inay la xiriirto saraakiisha garoonka Munich, balse uma aanay suurtagelin inay jawaab ka hesho.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo gaaray Bali-doogle
Ronaldo oo ganaax muteysan kara kaddib markii uu xalay laaday mid ka mid ah xiddigaha PSG